Home | Open Myanmar Initiative blog-post
Open Myanmar Initiative |
လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ (၆) မှ တွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များ
ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်သည် လွှတ်တော်များ၏ အဓိကတာဝန်များဖြစ်သော မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများကို ကိုယ်စားပြုရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ အစိုးရအား စိစစ်ထိန်းကျောင်းရေးတို့ကို ပိုမိုထိရောက်စွာနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများသည် ဥပဒေပြုခြင်း ဖြစ်စဉ်ထက် ပိုမိုလွယ်ကူ ရိုးရှင်းမှုများကြောင့်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်များအပေါ် မဲဆန္ဒရှင် နိုင်ငံသားများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် နားလည်မှုတို့ကို တစ်ဆင့်ချင်း တည်ဆောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံစေရန်အတွက်လည်းကောင်း စသည်တို့ကြောင့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများကို ဦးစွာ လေ့လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယခု (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအတွင်း မေးမြန်းခဲ့သော မေးခွန်းများ၊ တင်သွင်းခဲ့သော အဆိုများနှင့် အတည်ပြုခဲ့သော ဥပဒေကြမ်းများ၊ ထို့အတူ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပနေသည့် ရက်များအတွင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ခွင့်တိုင်ကြားရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော စာရင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း စာအုပ်များမှ ကောက်နှုတ်ပြီး မိမိတို့၏ တွေ့ရှိချက်များကို မှတ်တမ်းများပြုလုပ်၍ အစီအရင်ခံစာ ရေးသားပြုစုခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခု (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအတွင်း လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက်ပေါင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၃၇ ရက်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ၃၇ ရက်နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ၃၆ ရက် ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ထိုသို့ ကျင်းပခဲ့ရာတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ၃၇ ရက် ကျင်းပခဲ့ရာ မေးခွန်းစုစုပေါင်း ၁၇၁ ခု မေးမြန်းသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါမေးခွန်း မေးမြန်းခဲ့မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပါတီများအလိုက် လေ့လာမှု ပြုခဲ့ရာတွင် ပါတီစုစုပေါင်း ၁၃ ပါတီ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတို့မှ မေးခွန်းများ မေးမြန်းသွားခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုစုစုပေါင်း ၆ခု တင်သွင်း ဆွေးနွေးသွားခဲ့ရာတွင်လည်း အဆိုအားလုံးကို ပါတီနှစ်ခုမှ တင်သွင်းသွားခဲ့ပြီး အကြောင်းအရာအားဖြင့် ကဏ္ဍ ၄ခုနှင့် ဆက်စပ်၍ အဆိုများ တင်သွင်း သွားခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အတူ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ၃၇ ရက် ကျင်းပခဲ့ရာတွင်လည်း မေးခွန်းစုစုပေါင်း ၁၅၆ ခု မေးမြန်းသွားခဲ့ကြပြီး အဆိုပါ မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပါတီများအလိုက် လေ့လာမှုပြုခဲ့ရာတွင် ပါတီစုစုပေါင်း ၁၁ ပါတီနှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များမှ မေးခွန်းများ မေးမြန်းသွားခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုစုစုပေါင်း ၆ခု တင်သွင်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ရာတွင်လည်း အဆိုအားလုံးကို ပါတီနှစ်ခုမှ တင်သွင်းသွားခဲ့ပြီး အကြောင်းအရာအားဖြင့် ကဏ္ဍ ၅ခုနှင့် ဆက်စပ်၍ အဆိုများ တင်သွင်းသွားခဲ့ကြပါသည်။
သို့သော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့သည့်ရက်ပေါင်း ၃၆ ရက်အတွင်း မေးခွန်းများ မေးမြန်းခဲ့ခြင်းကို လုံးဝ မတွေ့ရှိခဲ့ရပေ။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒဿမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကာလများတွင် မေးခွန်းနှင့် အဆိုများကို မတွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကာလအတွင်း တင်သွင်းခဲ့သော အဆိုစုစုပေါင်း ၁၀ ခု ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အဆိုတင်သွင်းနိုင်ခဲ့မှုများကို တင်သွင်းခဲ့သော ပါတီများအလိုက် လေ့လာကြည့်ရာတွင် ပါတီ ၃ခုနှင့် ကော်မတီတစ်ခုတို့မှ အဆိုများ တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပြီး၊ အကြောင်းအရာအားဖြင့် ကဏ္ဍ ၄ခု ဆက်စပ်၍ တင်သွင်းခဲ့သော အဆိုများဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ အစည်းအဝေး ၃၆ ရက်တာ ကာလအတွင်း အတည်ပြုခဲ့သော ဥပဒေကြမ်းများကို ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် လွှတ်တော်စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးမှ ဇယားများဖြင့် ကောက်နှုတ်၍ လေ့လာမှု လွယ်ကူအောင် ဖော်ပြပေးခဲ့ပါသည်။
ယခု (၁၁) ကြိမ်မြောက် လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကာလများအတွင်း လွှတ်တော်များတွင် မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့မှုများကို လေ့လာရာတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်မှ ဒဿမအကြိမ်အထိ တစ်ရက်တာ မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့မှုများအား နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်ဆိုလျင် ယခု (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအတွင်း မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့မှုများသည် ယခင်မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့မှုများနှင့် ကွာဟမှုများစွာ ရှိမနေခဲ့ကြောင်းကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ၄င်းအပြင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပုံမှန် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပနေစဉ် (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့) အထိ ၆ လတာ ကာလများအတွင်း လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများ၌ ကြယ်ပွင့်ပြမေးမြန်းခဲ့သော မေးခွန်းများ ရှိနေသကဲ့သို့ပင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ စာဖြင့်မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းစုစုပေါင်း ၂၃၉ ခု ရှိခဲ့သည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ပညာရေးကဏ္ဍ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို အများဆုံး မေးမြန်းသွားခဲ့ကြပါသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် (၁၁)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး ကာလများအတွင်း မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့မှုများကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်မှ ဒဿမအကြိမ်အထိ တစ်ရက်တာ မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်ဆိုလျင် ယခု (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအတွင်း မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့မှုများသည် ယခင်မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့မှုများထက် မေးမြန်းနိုင်မှု လျော့နည်းလာခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ထိုသို့ မေးခွန်းမေးမြန်းသွားခဲ့မှုများတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကဏ္ဍများနှင့် လူမှုရေး အထောက်အပံ့ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများနှင့် သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကို ပိုမိုမေးမြန်းသွားခဲ့ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိုလည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကဏ္ဍများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ၊ လူမှုရေးအထောက်အပံ့ ကဏ္ဍဆိုင်ရာများကို အဓိက မေးမြန်းသွားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတူပင် အဆိုများ တင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့မှုများတွင်လည်း ယခင် ကျင်းပခဲ့ပြီးသော လွှတ်တော်ပုံမှန် အစည်းအဝေးများထက် နည်းပါးနေခဲ့ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကာလများအတွင်း တင်သွင်းခဲ့သော အဆိုများအားလုံးသည် ၄င်းအဆိုများနှင့် ပတ်သက်၍ ထောက်ခံသည့်သဘောဖြင့် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် ကိုယ်စားလှယ်များသော်လည်းကောင်း၊ ကန့်ကွက်သည့်သဘောဖြင့် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်များသော်လည်းကောင်း မရှိခဲ့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ထို့အတူပင် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းခဲ့သောအဆိုများအပေါ် လေ့လာကြည့်ရာတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့မှုသည် ယခင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် အဆိုများအပေါ် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှုများထက် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ကျဆင်းသွားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းခဲ့သော အဆိုများအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့မှုများသည်လည်း ယခင် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ကာလများအတွင်း အချိန်ယူ ဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြသကဲ့သို့ ဆွေးနွေးသွားခြင်းမျိုး မတွေ့ရှိရပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုတင်သွင်းခဲ့သည့် နေ့၌ပင် အစည်းအဝေး ကျင်းပနေသည့် တစ်ရက်တည်းနှင့် လွှတ်တော်မှ အဆုံးအဖြတ်များ ရယူခဲ့ကြောင်းကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲများနှင့်အတူ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေး အသွင်အသစ်တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပေသည်။ လွှတ်တော်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လည်း ငါးနှစ်တာ ကာလအတွင်း ဖြတ်သန်းမှု ရှိလာခဲ့ပြီး ဖြစ်သကဲ့သို့ လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများသည်လည်း ယခုအခါ (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေးကာလသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အပြောင်းအလဲကာလများအတွင်း ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်သည် တာဝန်ယူနိုင်မှု၊ တာဝန်ခံနိုင်မှု အားကောင်းသည့် မဏ္ဍိုင်များအဖြစ် မိမိတို့၏ မဲဆန္ဒရှင် နိုင်ငံသားများအား သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ဆက်စပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ဆောင်ရွက်မှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနားလည်လာစေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် လိုအပ်ပေသည်။
လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပိုမိုအားကောင်းလာမှသာလျှင် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ပိုမိုဆောင်ရွက်လာနိုင်သည့် သဘောပင် ဖြစ်ပေသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှလည်း လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အားကောင်းလာသည့် အခြေအနေကို အရအမိ ဆုပ်ကိုင်ပြီး မတူကွဲပြားသော အမြင်များ၊ ရှုထောင့်များအားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် လုံခြုံမှုကို ပိုမိုမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
လွှတ်တော်၏ အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဖြစ်သော မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ အဆိုများတင်သွင်းခြင်းနှင့် ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လွှတ်တော်အင်စတီကျူးရှင်းများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများသည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် အပြောင်းအလဲများကို ပိုမိုပုံဖော်ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ပေသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့၏ တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံရေးပါတီနောက်ခံစသည့် အချက်အလက်များအပေါ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းထက် ဒီမိုကရေစီနှင့် နိုင်ငံရေးအလေအထကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေးကို ရှေးရှု၍ မေးခွန်းများ မေးမြန်းမှုတွင်လည်းကောင်း၊ အဆိုများ တင်သွင်းမှုတွင်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေကြမ်းများ တင်သွင်းမှုတွင်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် ကိုယ်စားပြုသူများ၊ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွင်ရှိသူများ အားလုံး၏ အမြင်ရှုထောင့်များ၊ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားမှုများလည်း တန်ဖိုးထား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ မိမိတို့၏ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများနှင့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုများကိုလည်း မပြတ်အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲသက်တမ်း ကာလတစ်ခုကို ကုန်လွန်ဖြတ်သန်းရန် ကာလတို အပိုင်းအခြားတစ်ခုသာ ကျန်ရှိတော့သည့်အတွက် မိမိတို့၏ မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို မပြတ်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း၊ မိမိတို့၏ဒေသ၊ မိမိတို့နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆက်စပ်သော အရေးကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အသိပေးခြင်းအားဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ပိုမိုမြင့်မားလာစေနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်စားပြုမှု၊ ဥပဒေပြုမှု၊ အစိုးရအား ထိန်းကျောင်း စိစစ်မှုစသော စွမ်းဆောင်ရည်များလည်း ပိုမိုမြင့်မားစွာ ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Parliamentary Monitoring Program (10)
Budget Monitoring Program (14)
Right to Know (19)
Training Update (18)
ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းကာလအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားသော အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ရာတွင် နိုင်ငံသားတိုင်း တစ်ဦးမကျန် အားစိုက်ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေရန်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် အသိဉာဏ်အလင်း ရပိုင်ခွင့်များကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အကျိုးအမြတ် ရယူခြင်းမရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပွင့်လင်းမြန်မာရှေ့ဆောင်၏ လုပ်ငန်းများသည် အောက်ဖော်ပြပါ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်​ ၁၀၁၈၊ သစ္စာလမ်​း၊ ၁၀ ရပ်​ကွက်​၊ ​တောင်​ဥက္ကလာပမြို့နယ်​၊ ရန်​ကုန်​။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျက်များကို ဂရပ်များဖြင့် အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်စေရန်နှင့် အချက်အလက်များ ပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ရယူ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဖော်ပြထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့လွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လွှတ်တော်တွင်း ဆောင်ရွက်ချက် အချက်အလက်များ။
OMI Myanmar © 2016. All Right Reserved. Developed by
Myanmar Links. Powered by OctoberCMS